हामीलाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले कार्वाही गरियो– प्रहरी विद्रोहका कमाण्डर धनवहादुर
माघ २९, वाँके । आज भन्दा १२ वर्ष अघि नेपालगंजमा ठुलो प्रहरी विद्रोह भयो । जुन विद्रोहले राज्यसत्तामा वस्नेहरुको जरा नै हल्लायो ।
सयौ प्रहरीहरुले आफु माथि संगठन भित्रै वाट हुने विभेदको अन्त्य हुनु पर्ने मागहरु राखेका थिए । तर ति मागहरु दमन र षड्यन्त्रवाट अन्ततः तुहाईएको थियो । त्यही प्रहरी विद्रोहका मुख्य योजनाकार तथा कमाण्डर हुनुहुन्थ्यो वर्दिया वढैयाताल गाउँपालिका १ डाफँेका धन वहादुर वि.क. ।
विकले प्रहरी विद्रोहका वेला विद्रोही प्रहरी संग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने सरकारले भने पनि वार्ताको नौटंकी र षड्यन्त्र रचेर विद्रोह माथि दमन गरिएको वताउनु भएको छ ।
उहाँले ज्वाला खवर संगको कुराकानीमा प्रहरी संगठन भित्र हुने विभेदका विरुद्ध संगठित रुपमा आन्दोलन गर्दा वार्ता वाट समस्या सामाधान गर्छौ भनियो तर वाहिर आत्मसमपर्ण गरिसके भनेर भ्रम फैलाउदै विद्रोह गर्ने मध्यका ९२ जना प्रहरी माथि अन्यायपूर्ण कार्वाही गरियो भन्नु भयो ।
वि.स. २०६५ साल असार २८ गते देखि असार ३० गते राती सम्म दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण नेपालगंजमा संगठित रुपमा प्रहरी विद्रोह भएको थियो ।
तत्कालिन प्रहरीका सई तथा विद्रोहका कमाण्डर विकको टोलीले रासन भत्ताको हिनामिना नियन्त्रण हुनु पर्ने, सरुवा वढुवामा पक्षपात रोक्नु पर्ने, प्रहरी संगठन भित्रको अन्याय अत्याचार शोषण,दमनको अन्त्य हुनु पर्ने, महिला प्रहरी माथिको यौन शोषण वन्द गरिनु पर्ने, प्रहरी संगठन माथिको राजनैतिक हस्तक्षेप वन्द गरिनु पर्ने, विदेश मिशनमा हुने पक्षपात रोकिनु पर्ने ,नातावाद,कृपावाद,भ्रष्टाचार,घुसखोरी वन्द हुनुपर्ने ,सरकारी सवाँरी साधनको सहि सदुपयोग हुनु पर्ने लगायतका २१ वुदे माग राखेको थियो । यी मागहरु माथि गणमा भएका ३३६ जना प्रहरीहरुले समर्थन जनाएका थिए । पछि दवाव र दमनले केही प्रहरीहरु मौन अवस्थामा वसेका थिए ।
सवै मागहरु सकरात्मक छन । आन्दोलन फिर्ता गर्नुहोस । वार्ता वाट समस्या सामाधान गरौंला भनियो तर प्रहरी निमावली र प्रहरी ऐनको डण्डा लाई मुख्य वनाएर ९२ जना माथि कार्वाही गरियो विद्रोही प्रहरीका कमाण्डर विकले भन्नु भयो ।
प्रहरी ऐन २०१२ अन्तरगत ४९ जनालाई कार्वाही गरियो । जसमा २२ जनालाई १ वर्षको तलव वरावर जरिवाना गरियो भने १४ जनालाई २ वर्षको तलव वरावर जरिवाना गरियो ।
आन्दोलनको मुख्य योजनाकार विक सहित १३ जना अगुवाहरुलाई १४ वर्षको जेल सजाय गरियो । अन्ततः त्यहि जेल सजायलाई भुक्तानी गरेर विद्रोही सई विक २०७२ साल जेठ १० गते रिहा हुनु भएको छ । प्रहरी निमावली अन्तरगत ४३ जनालाई विद्रोही प्रहरीलाई जागीरवाट वर्खास्त गरियो । यो नेपाली इतिहासमा असाध्यै ठुलो न्यायपूर्ण विद्रोह भएपनि राज्यले षड्यन्त्र गरेर दवायो पूर्व सई विद्रोही प्रहरी विकले भन्नु भयो ।
गणका तत्कालिन एस.पि. अख्तर अलि अन्सारीको समेत विद्राहमा समर्थन भएपनि पछि उहाँकै जाहेरीमा विद्रोह गर्ने प्रहरी माथि कार्वाही गरियो विकको भनाई छ ।
उहाँले भन्नु भयो वार्तावाट समस्या सामाधान हुन्छ भनियो विद्रोह गर्ने सवै प्रहरीलाई रातारात अन्यत्र सरुवा गरियो । तितर वितर वनाइयो । असार ३१ गते विहान ७ वजे तिर आफु माथि एकाएक हत्कडी लगाईयो र वाँके हिरासतमा लगियो ।
राज्यले विस्तारै विद्रोह गर्ने प्रहरी जता जता पठाईएको छ एक –एक गर्दै तान्दै कार्वाही गर्यो । यो नितान्त षड्यन्त्र र प्रहरी भित्रको न्यायपूर्ण आवाज माथि लगाइएको भोटे ताल्चा थियो विद्राही प्रहरीका पुर्व सई विकले भन्नु भयो ।
तत्कालिन समयमा गिरीजा प्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री र कृष्ण प्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुदा यस्तो विद्रोह भएको थियो । गृममन्त्री सिटौलाले समेत आफुलाई फोन गरेर आन्दोलन फिर्ता लिनुहोस ,मागहरु सम्वोधन गर्छौ भन्नु भयो तर त्यसको सट्टा हत्कडी लगाइयो उहाँको गुनासो थियो ।
उहाँले भन्नु भयो मागहरु कुनै व्यक्तिगत स्वार्थमा थिएनन् । समग्र प्रहरी संगठन भित्रको अन्याय, अत्याचार वेथिति विभेद हटाउन राखिएको थियो । तर पनि प्रहरी तथा संैन्य संगठन भित्र विद्रोह गर्न नपाईने माथिल्लो निकायको आदेश राम्रो नराम्रो जे जस्तो भएपनि पालना गर्नु पर्ने ऐन नियमले गर्दा विद्रोहीका माग राम्रा भएपनि सरकारले अपराधको रुपमा चित्रण गर्यो ।
विद्राही प्रहरीलाई अदालत जाने ढोका समेत वन्द गरियो । उनीहरुलाई प्रहरी ऐन २०१२ अनुसार छुट्टै प्रहरी ऐन विशेष अदालत गठन गरेर कार्वाही गरियो । प्रहरी ऐन विशेष अदालत भित्र सह न्यायधिवक्ता,सिडियो र प्रहरीको डिआईजी रहने व्यवस्था छ । जसका विरुद्ध आन्दोलन गुर्न पर्यो उही न्यायधिस भएपछि न्याय पाईने कुरै भएन विकले भन्नु भयो । जसले गर्दा आफ्नो आन्दोलनको माग सहि भएपनि दमन र षड्यन्त्र वाट दवाईयो विकको भनाई छ ।
उहाँले आफु माथिको अन्याय र अत्याचार सवै नेपालीहरुले वुझदिन आग्रह गर्दै यो दलाल ,भ्रष्ट संसदीय व्यवस्था रहदा सम्म राम्रो माग उठाउनेको कुनै महत्व नहुने वताउनु भयो ।
दलाल,भ्रष्टहरुको सत्ता सदाको लागि अन्त्य नभए सम्म वास्तविक पीडितहरुले न्याय नपाउने ठोकुवा गर्दै विकले आउदा दिनमा पनि प्रहरी साथीहरुले न्यायपूर्ण आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्न अपिल गर्नु भयो ।